Ampidiro ao amin'ny Technorati Favorites | ny sakafonao mpamaky Google Martech Zone
Ampidiro ao amin'ny Technorati Favorites ny fakan'ny mpamaky Google
Talata, Aprily 17, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo antony mampiavaka ny algorithman an'i Technorati dia ny isan'ny bilaogera hafa maro nanavotra ny bilaoginao ho tianao ao amin'ny kaonty Technorati (azonao ampiana eto ny ahy).
Raha mampiasa Google Reader na mpamaky feed hafa ianao, dia misy fomba tsotra kely fotsiny hanampiana ny tianao rehetra, na izany aza! Azonao atao ny manondrana ny OPML apetraho amin'ny mpamaky anao ary ampidiro ao amin'ny Technorati fotsiny:
Manondrana an OPML avy amin'i Google (rohy havia ambany):
Manafatra ny OPML ampidiro ao amin'ny tianao indrindra Technorati:
Rohy: Ampidiro ny OPML ampidiro ao amin'ny tianao indrindra Technorati.
Apr 17, 2007 ao amin'ny 4: PM PM
Nanontany tena aho hoe ahoana no hanaovana an'io, ary nieritreritra ny hanao app aho.
Ny eritreritro fotsiny dia hoe mety tsy mahazaka feed feeds feederer araka ny tokony ho izy ity?
Apr 18, 2007 ao amin'ny 7: PM PM
Raha ny feed voafaritra ao amin'ny Technorati dia mifanitsy amin'ny feed feedburner dia hanana izany. Manao lalao mivantana fotsiny eo amin'ny adiresy fahana ao amin'ny rakitra OPML anao sy ao Technorati.
Dec 26, 2007 ao amin'ny 6: PM PM
Hey, fantatro fa lahatsoratra taloha ity, saingy vao avy nampiasaiko tamin'izany, tena manampy, misaotra 🙂
Dec 26, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Miloka ianao, muskawo!